तपाईं नेपाललाई बुद्धको देश भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ या सगरमाथाको देश भनेर चिनाउनुहुन्छ? « Kamana
सगरमाथा देखाएर चिनाउँछु : रवीन्द्र झा
म नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर चिनाउन चाहन्छु। किनभने पक्कै पनि गौतम बुद्धभन्दा पहिले सगरमाथाको उत्पत्ति भएको थियो। सगरमाथा भएर नै गौतम बुद्धको जन्म भएको हो कि? प्रकृतिभन्दा माथि कुनै पनि कुरा हँुदैन। यस कारण सगरमाथालाई पहिलो र गौतम बुद्धलाई दोस्रो स्थानमा राखेर हेर्छु।
दुवै धरोहर : प्रदीप खड्का
गौतम बुद्ध र सगरमाथा भनेका नेपालको धरोहर हुन्। पुर्खाले के गरे भनेर वा प्राकृतिक कुरामा गर्व गर्नेभन्दा पनि अहिले मोर्डन कुराबाट देशलाई चिनाउन सक्नुपर्छ।
सगरमाथा चिनाउनुमा फाइदा छ : सिर्जना सुब्बा
अहिलेको परिस्थितिमा नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर चिनाउनुमै फाइदा छ। अब पर्यटन वर्ष पनि आरम्भ हँुदै छ भने कृषिपछिको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पर्यटन हो। इतिहास हेर्ने हो भने गौतम बुद्ध जन्मिँदा नेपाल र भारत विभाजन भएको थिएन। नेपालमा गौतम बुद्ध जन्मेका थिए भन्ने कुरा पछि अशोकस्तम्भ भेटिएपछि मात्र थाहा भएको हो। त्यसमाथि अहिले धर्मको विषयमा बोलिहाल्न अप्ठेरो छ।
सगरमाथा हाम्रो शान हो : प्रमोद अग्रहरी
मेरो विचारमा त सगरमाथा र बुद्धलाई अप्सनमा राख्नुहुन्न। दुवै सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। किनभने यी दुवै हाम्रो देशका चिनारी हुन्। हामी बुद्धकै देशमा जन्मेका हौं भने सगरमाथा हाम्रो शान हो।
दुवै महङ्खवपूर्ण : मल्लिका कार्की
गौतम बुद्ध र सगरमाथा दुवै हाम्रो देशका महङ्खवपूर्ण कुरा हुन्। एउटा देशमा जाँदा त्यहाँ बुद्धका धेरै मूर्तिहरु राखिएका थिए। मैले बुद्ध त हाम्रो देशमा जन्मिएका हुन् नि भन्दा होइन भारतमा जन्मिएका हुन् भन्नुभयो । त्यस कारण यसमा कन्ट्रोभर्सी नै छ। चिनाउन पर्दा सगरमाथाको देश हो भनेर चिनाउन चाहन्छु।
बुद्धको देश भनेर चिनाउन चाहन्छु : सविन श्रेष्ठ
म नेपाललाई बुद्धको देश भनेर चिनाउन चाहन्छु। किनभने सगरमाथाको देश भनेर त संसारले चिनिरहेकै छ। बुद्धको देश भन्ने कुरा मानिसमा कन्फ्युजन छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा पनि कन्फ्युजन भएको कारण बुद्धको देश भनेर चिनाउन चाहन्छु।
हाम्रो हुनुमा गौरव छ : आँचल शर्मा
मेरो विचारमा त सगरमाथा र बुद्ध दुवै कुरा नेपालको हो भनेर चिनिएको छ। यस कारण यो कुरा हाम्रो हो भनेर गन्थन गरेको मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन। यी दुवै कुरा हाम्रै हो र हाम्रो हुनुमा गौरव छ।
बुद्धबाट चिनाउनु राम्रो : पुष्प खड्का
यी दुवैबाट नेपाल चिनिएको छ। सगरमाथा जियोग्राफिकल्ली दिएको चिज हो भने बुद्ध पनि नेपालकै हुन् भनेर विश्वले चिनेको छ। गौतम बुद्धले आफ्नै संघर्षमार्फत ज्ञान तथा सन्देश बाँड्दै विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउनुभयो। संसारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा बाँध्नु भनेको सानो कुरा होइन। यस कारण बुद्धबाट नै नेपाल चिनाउनु राम्रो हुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरु नेपालले जन्माउँदै जाओस् भन्ने लाग्छ।
छर्लङ्ग पार्न सक्नुपर्छ : टीका प्रसाईं
खासमा यी दुवैबाट नेपाल चिनिइरहेको छ। नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर संसारले सजिलै चिन्छ भने बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने भ्रम कतिपयलाई रहेको छ। यस कारण बुद्ध वा सगरमाथामा एकलाई छोडेर अर्को रोज्नुभन्दा पनि कन्फ्युजन रहेको कुरामा यो नेपालको हो भनेर छर्लङ्ग पार्न सक्नुपर्छ।
सगरमाथाको देशमा बुद्ध जन्मिए : करिश्मा मानन्धर
जियोग्राफीको हिसाबमा हामी बुद्धको देशमा छौं। सगरमाथाको देशमा गौतम बुद्ध जन्मिएका हुन्। यस कारण म नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर चिनाउन चाहन्छु। गौतम बुद्धजस्तो मान्छे नेपालमा अझ धेरै जन्मिऊन्। बुद्धले फैलाएको शान्तिको सन्देशको हिसाबले हेर्ने हो भने त पहिलो नम्बरमा बुद्ध नै रोज्नुपर्ने हो तर जियोग्राफीको हिसाबले सगरमाथाको देश भनेर चिनाउन चाहन्छु।